musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hawaii Kupwanya Nhau » Hawaii in state of emergency zvino sezvo dutu guru rinopisa zvitsuwa
Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hawaii Kupwanya Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • vanhu • Resorts • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
Nekuda kwekutyisidzirwa kwekunaya kwemvura yakawandisa, mawadhi emafashamu akapihwa zvitsuwa zvese uye anotarisirwa kuramba aripo kusvika Muvhuro masikati.
Dutu rine simba riri kurova zvitsuwa zveHawaiian nemhepo ine simba uye mvura zhinji ine mafashamo, ine blizzard mamiriro anotarisirwa kune dzimwe nzvimbo dzakakwirira.
A state of emergency yakaburitswa Hawaii neSvondo mangwanani nekuda kwemafashama akanyanya uye nemhepo ine chando.
Yakawanda yenzvimbo ye50 yakaomeswa zvisingaite nguva pfupi yadarika, ine zvikamu zve Hawaii mukusanaya kwemvura kwakanyanya. Mvura yaidiwa yakatanga neChishanu, asi inogona kunge yakanyanya kunaka.
Kusanaya kwemvura kwave kuwedzera Hawaii yakawedzera zvakanyanya mushure meMbudzi yakaoma kwazvo. Honolulu, iyo inosvika masendimita 2.25 emvura munaNovember, yakatora 0.09 chete yeinji.